Yelula block mpo - kuba umsebenzi elula ukuqaliswa ubuchwepheshe eyenza futha efanele kakhulu ezibanzi imisipha emuva. Ukuze usebenze asetshenziswa amagobolondo ekhethekile. Ngaphezu kwalokho, kukhona izindlela ezimbalwa ukwenza lo msebenzi.
Yikuphi imisipha abasebenza phakathi okusalungiswa futhi kungani kufanele kwenziwe?
Kunezimo lapho umuntu, nganoma isiphi isizathu, angeke kufuthwe ngokudonsa emuva. Lokhu kusebenza Wabasaqalayo kanye abasubathi abanolwazi abafuna diversify iprogramme. Xhumanisa iyunithi mpo kwenza amaqembu kwemisipha omkhulu ezifana webele, le okubanzi, emuva engenhla, ibhodi lemisindo, bicep.
Buhle lesi sivivinyo wukuthi ungakwazi ukulawula umthwalo, uthome aphansi. Kwakuthi lapho ngima lapho-ke ngeke kwenziwe, njengoba usebenza nge isisindo sakho siqu umzimba, okuyinto lingaba likhulu kakhulu. Lokho iyasiza lokhu ukuvivinya umzimba akuyona into kuphela kubagijimi kodwa futhi abantu ukhuluphele abafuna kukhombisa sibalo enhle. Ngaphezu kwalokho, kule ndaba, ke kwanciphisa ingozi yokulimala noma uhlobo.
Izici izinduku mpo ukubamba wonke
Ukuze wenze lo msebenzi ngendlela efanele, kumele bathobele inqubo:
1. Kubalulekile ukuya Simulator futhi silungise imilenze ukuze babengesibo emoyeni ngesikhatsi kokuhlinzwa. Manje bekani izandla zenu futhi ubambe ibha, ukubeka izandla zakhe kabanzi. Uma wena awukwazi ukufinyelela, buza umfundisi ukukusiza. Umhlane okufanele kuqonde okhalweni ezihambisanayo.
2. Ngaphezu kwalokho, mpo saliphosa block senziwa isango olubanzi kangaka: inhales futhi ngokushelela ukudonsa ibha esifubeni. Blades ngesikhathi esifanayo zingancishiswa, esishubile imisipha emuva. Ngemva ugongolo ifinyelele ehlombe, ayeke.
3. Manje kancane vele ubuyele ibha endaweni yawo. Kuphela manje ungakwazi exhale. Ngemva kwakuke kumiwe imizuzwana embalwa, ungakwazi uqhubekele ukuphindaphindwa esilandelayo.
Ngesikhathi kokuhlinzwa, silalela iqiniso lokuthi emikhulu iyoba isango lakho, imisipha izosebenza nzima.
Technique ukwelula isango reverse
Ngenxa yaleli lungiselelo, ungakwazi belingisa esifubeni enhle wezemidlalo. Xhumanisa mpo block reverse isango kwenziwa kanje:
1. Hlala endaweni Simulator futhi silungise izinyawo. Kulokhu, isifuba kumele kube nje ngaphansi oluvundlile. Finyelela futhi yiphathe kusuka phansi. Hands kufanele ibekwe ehlombe-ububanzi ngaphandle, emuva okumelwe ingaphazamiseki futhi ibe kancane esishubile.
2. Ngokulandelayo, udinga ukuthatha umoya bese uqale edonsa ibha nesifuba. Ngesikhathi esifanayo, zama ukuba nzima imisipha emuva. Izindololwane akumelwe kwenziwe ukuze ohlangothini. Lapho ugongolo kuyoba ebeleni ngokwayo, kubalulekile ukwenza kokuhlaba ikhefu elincane bese ugcine ukudla.
3. Manje entanyeni kancane kubuyela isikhundla ukuqala bese exhale. Ngemva kokuhlaba ikhefu isikhathi esifushane, ukuphinda umsebenzi futhi.
Xhumanisa block mpo wenziwa amasethi eziningana silingo-up rungs 8-10. Umhlane kufanele ahlale flat kulo msebenzi. Ngesikhathi kokuhlinzwa, ubunzima engathandeki esiswini cindezela. Uma lokhu kwenzeka, kusho ukuthi udinga ukwehlisa isisindo umthwalo. Ekuqaleni ekusebenziseni kubalulekile ukunciphisa ukudla, bese uqale ukudonsa off.
Ngesikhathi kokuhlinzwa, wenze izindololwane uqinisekile: badinga igcinwe isikhundla uqotho. umsebenzi Pulldown kumele kwenziwe nge ukubambezeleka ukuphefumula, esiza ukugcina esifubeni sikhundla lengiyo.
Zonke Wilks Coefficient
Kanjani ukwakha trapezoid?
Uhlelo amandla ukuqeqeshwa kwabesifazane labesilisa
Ukuphakamisa dumbbells phambi kwakho: Ukuzivocavoca Wabasaqalayo
Amasistimu pre-Amazing (2014): ethandwa futhi ngempumelelo
Hamstrings - izivivinyo nezindlela ukuqeqeshwa
Indlela ukubhaka ithanga
Ukuphuza kwesigidi: i-whiskey ezibizayo kakhulu emhlabeni
Filmography Nikki Reed. (Nikki Reed). Uhlu amabhayisikobho engcono
Izihloko esakhiwe ngezinto zemvelo: panel eyenziwe amagobolondo
Cork izibuya Warm: umthengi ukubuyekezwa kanye nesakhiwo nezimpawu
Ukukhula ingacaciswa shift kwesokudla. Amapharamitha sokukhula komnotho
Ukushisa okungcono kakhulu kokubhukuda olwandle
Izikebhe inhlanzi, kebabs, inkukhu
Isitatimende lesifinyetiwe "Times ziyashintsha, isizukulwane esisha siyeza." ukuhlaziywa Umbhalo futhi indlela yokudala esabelweni
Umkakhe lamabeletho: imibono. Nikelani lokuzalwa lomkakhe ngezandla zakhe: isithombe
Kungani sidinga amabhange ukumbhucunga?
Funda indlela ukudweba Kalina